Naya Drishti | देउवालाई यस्तो जवाफ दिएर 'महन्त - राजेन्द्र' गए सिधै बालुवाटार, अब के गर्लान देउवा ? - Naya Drishti देउवालाई यस्तो जवाफ दिएर 'महन्त - राजेन्द्र' गए सिधै बालुवाटार, अब के गर्लान देउवा ? - Naya Drishti
देउवालाई यस्तो जवाफ दिएर ‘महन्त – राजेन्द्र’ गए सिधै बालुवाटार, अब के गर्लान देउवा ?
वैशाख २६, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय जसपाले नगरेको जानकारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् ।
तत्पश्चात ‘ठाकुर- महतो’ सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएका छन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्केपछि जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बालुवाटार छिरेका छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार करिव १० मिनेट अघि उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार छिरेका हुन्।
बालुवाटार पुगेर ओलीलाई ठाकुरले भने – विस्वासको मत दिदैनौं, ओलीले गरे यस्तो आग्रह